15 O wee ruo mgbe ihe ndị ahụ gasịrị na Absalọm kwadebeere onwe ya ụgbọ ịnyịnya, o nwetakwara ọtụtụ ịnyịnya na ndị ikom iri ise na-agba ọsọ n’ihu ya.+ 2 Absalọm wee bilie n’isi ụtụtụ+ gaa guzoro n’akụkụ okporo ụzọ e si abanye n’ọnụ ụzọ ámá.+ O wee ruo na mgbe mmadụ ọ bụla nwere okwu ikpe wee bịakwute eze ka o leba ikpe ya anya,+ Absalọm na-akpọ ya jụọ, sị: “Olee obodo i si bịa?” onye ahụ asị: “Ohu gị si n’otu n’ime ebo Izrel.” 3 Absalọm na-asịkwa ya: “Lee, okwu gị dị mma, kwụrụkwa ọtọ; ma ọ dịghị onye eze họpụtara ka o gee gị ntị.”+ 4 Absalọm na-asịkwa: “A sị nnọọ na a họpụtara m ịbụ onyeikpe n’ala a,+ ka onye ọ bụla nke nwere okwu ikpe ma ọ bụ ikpe ọ chọrọ ka e kpeere ya bịakwute m! Mgbe ahụ, m ga-eme ka o nweta ikpe ziri ezi.”+ 5 Ọ na-erukwa na mgbe mmadụ bịara nso ịkpọrọ ya isiala, ọ na-amatị aka jide ya+ wee susuo ya ọnụ. 6 Absalọm wee na-eme ndị Izrel niile otú a, bụ́ ndị na-abịakwute eze maka ikpe; Absalọm wee na-ezuru obi ndị Izrel.+ 7 O wee ruo mgbe afọ iri anọ gwụchara na Absalọm sịrị eze: “Biko, ka m gaa Hibrọn+ mezuo nkwa m kwere Jehova.+ 8 N’ihi na ohu gị kwere nkwa+ mgbe m bi na Geshọ+ nke dị na Siria, sị, ‘Ọ bụrụ na Jehova emee ka m laghachi na Jeruselem, m ga-ejere Jehova ozi.’”+ 9 Eze wee sị ya: “Gaa n’udo.”+ O wee bilie gaa Hibrọn. 10 Absalọm wee ziga ndị nledo+ n’ebo niile nke Izrel, sị: “Ozugbo unu nụrụ ụda opi, sịnụ, ‘Absalọm aghọọla eze+ na Hibrọn!’”+ 11 Narị ndị ikom abụọ, bụ́ ndị a kpọrọ, si na Jeruselem soro Absalọm gawa n’ebughị ihe ọ bụla n’obi,+ ha amaghịkwa ihe ọ bụla na-emenụ. 12 Mgbe Absalọm chụkwara àjà ndị ahụ, o ziri ozi ka Ahitofel+ onye Gaịlo,+ bụ́ onye ndụmọdụ Devid,+ si n’obodo ya bụ́ Gaịlo bịa.+ Izu ọjọọ+ ahụ wee na-esiwanye ike, ndị dịnyeere Absalọm wee na-adịwanye ọtụtụ.+ 13 Ka oge na-aga, onye mgbaàmà bịakwutere Devid, sị: “Obi+ ndị Izrel dịzi n’ebe Absalọm nọ.” 14 Ozugbo ahụ, Devid gwara ndị niile na-ejere ya ozi bụ́ ndị ya na ha nọ na Jeruselem, sị: “Bilienụ, ka anyị gbapụ;+ n’ihi na anyị agaghị enwe ụzọ mgbapụ n’ihi Absalọm! Meenụ ọsọ ọsọ, ka ọ ghara ime ngwa ngwa chụkwute anyị wee mee ka ihe ọjọọ dakwasị anyị, jirikwa ihu mma agha bibie obodo a!”+ 15 Ndị na-ejere eze ozi wee sị eze: “Dị ka ihe niile onyenwe m eze chọrọ si dị, ndị na-ejere gị ozi nọ ya.”+ 16 Eze wee pụọ, ndị ezinụlọ ya niile sochikwara ya,+ eze wee hapụ ndị inyom iri, bụ́ ndị iko ya,+ ka ha na-elekọta ụlọ. 17 Eze wee gawa, ya na ndị niile sochiri ya; ha wee kwụsịtụ na Bet-mehak. 18 Ndị niile na-ejere ya ozi wee na-agafe n’akụkụ ya; ndị Keretaịt niile na ndị Peletaịt+ niile na ndị Gat+ niile, narị ndị ikom isii, bụ́ ndị si Gat soro ya,+ wee na-agafe n’ihu eze. 19 Eze wee gwa Ịtaị+ onye Gat, sị: “Gịnị mere gị onwe gị kwa ji na-eso anyị? Laghachi+ ka gị na eze biri; n’ihi na ị bụ onye mba ọzọ, e wezụgakwa nke ahụ, ị bụ onye e si n’obodo ya dọta n’agha. 20 Ụnyaahụ ka ị bịara, m̀ ga-emekwa ka i soro anyị na-awagharị+ taa, ka i soro m na-aga ebe ọ bụla m na-aga? Laghachi, kpọrọkwa ụmụnne gị laghachi, ka Jehova gosikwa gị obiọma*+ na ikwesị ntụkwasị obi!”+ 21 Ma Ịtaị zara eze, sị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ, dịkwa nnọọ ka onyenwe m eze dị ndụ,+ n’ebe onyenwe m eze nọ, ma ọ bụ n’ọnwụ ma ọ bụ ná ndụ, n’ebe ahụ ka ohu gị ga-anọ!”+ 22 Devid wee sị Ịtaị:+ “Gawa, gafere.” Ịtaị onye Gat wee gafere, tinyere ndị ikom ya niile na ụmụntakịrị niile so ya. 23 Ndị ala ahụ niile nọ na-akwa ákwá n’olu dara ụda,+ mmadụ niile nọkwa na-agafe, eze guzo n’akụkụ ndagwurugwu Kidrọn,+ mmadụ niile nọkwa na-agabiga n’okporo ụzọ sara mbara e si aga n’ala ịkpa. 24 Lee, Zedọk+ na ndị Livaị+ niile bukwa+ igbe+ ọgbụgba ndụ ezi Chineke bịa; ha wee dọba igbe ezi Chineke n’akụkụ Abayata+ ruo mgbe mmadụ niile si n’obodo gafetachaa. 25 Ma eze sịrị Zedọk: “Bughachi+ igbe ezi Chineke n’obodo.+ Ọ bụrụ na ihe m adị Jehova mma, ọ ga-akpọghachite m wee mee ka m hụ ya nakwa ebe obibi ya.+ 26 Ma ọ bụrụ na ọ sị, ‘Ihe gị adịghị m mma,’ lee m, ya mee m otú ọ bụla dị ya mma.”+ 27 Eze wee sị Zedọk onye nchụàjà: “Ọ̀ kwa ị bụdị onye ọhụ ụzọ?+ Laghachi n’obodo n’udo, gị na Ahimaz nwa gị na Jọnatan+ nwa Abayata, ụmụ unu abụọ, unu na ha. 28 Lee, m ga-echeretụ n’ebe a na-eji ụkwụ agafe mmiri, nke dị nso n’ala ịkpa, ruo mgbe unu ga-ezi m ozi.”+ 29 Zedọk na Abayata wee bughachi igbe ezi Chineke na Jeruselem, ha wee biri n’ebe ahụ. 30 Devid nọ na-agbago n’ugwu Oliv,+ kwara ákwá na-agbago, o kpuchikwara isi ya;+ ọ gbakwa ụkwụ ọtọ na-aga, ndị niile so ya kpuchikwara isi ha, ha wee kwara ákwá na-agbago.+ 31 E wee kọọrọ Devid, sị: “Ahitofel so ná ndị ha na Absalọm+ na-agba izu ọjọọ.”+ Devid wee sị:+ “Biko, Jehova,+ mee ka ndụmọdụ Ahitofel ghọọ ihe nzuzu!”+ 32 O wee ruo na mgbe Devid rutere n’elu elu ugwu ahụ, bụ́ ebe ndị mmadụ na-anọ akpọrọ Chineke isiala, lee, Hushaị+ onye Akaịt+ bịara izute ya, ọ dọwara uwe ya adọwa, kpokwasịkwa ájá n’isi.+ 33 Otú ọ dị, Devid sịrị ya: “Ọ bụrụ na i soro m gafee, ị ga-abụrụ m ibu arọ.+ 34 Ma ọ bụrụ na ị laghachi n’obodo wee sị Absalọm, ‘Eze, abụ m ohu gị. Abụ m ohu nna gị mgbe mbụ, ee, abụ m ohu ya n’oge ahụ, ma ugbu a, abụzi m ohu gị,’+ ị ga-emebiri+ m ndụmọdụ Ahitofel. 35 Ọ̀ bụ na Zedọk na Abayata bụ́ ndị nchụàjà esoghị gị nọrọ n’ebe ahụ?+ Ọ ga-erukwa na ihe ọ bụla ị nụrụ n’ụlọ eze, ị ga-akọrọ ya Zedọk na Abayata bụ́ ndị nchụàjà.+ 36 Lee! Ụmụ ha abụọ, Ahimaz+ nwa Zedọk na Jọnatan+ nwa Abayata sokwa ha nọrọ n’ebe ahụ; ọ bụkwa ha ka unu ga-ezi ihe ọ bụla unu ga-anụta ka ha bịa zie m.” 37 Hushaị, enyi+ Devid, wee bata n’ime obodo. Absalọm+ wee bata na Jeruselem.